Ọrụ nhazi usoro ọrụ Glove Production
Ngwongwo ihe eji emeputa glove bu akụrụngwa buru ibu. Enwere ụfọdụ ihe achọrọ maka ogo ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana akụkụ ọrụ ndị metụtara ya. Ndị otu okike Chuangmei ga-enye ọrụ aka ọkachamara na sayensị nke na-emepụta usoro na nkesa na-adabere na mkpa ndị ahịa na oke osisi. Ndị ahịa nwere ike ịga n'ihu. Onodi ohere oghere.
1) Onye ahịa ahụ na-enye ogologo, obosara, na ịdị elu dị elu nke osisi ma ọ bụ eserese eserese, eserese, vidiyo, wdg, ndị otu Chuangmei na-enyekwa nkọwapụta usoro / ikike dị mma yana usoro ihe ọkụkụ dabara adaba dabere na ozi a;
2) Ọ bụrụ na onye ahịa enweghị osisi dị, ha nwere ike ịnye ikike ịchọrọ ikike ebumnuche. Ndị otu Chuangmei ga-enye usoro ịkesa usoro sayensị na ndị ọkachamara dabere na ikike ikike imepụta ya, maapụ nkesa ihe ọkụkụ, na onye ahịa nwere ike ịchọta ma ọ bụ wuo osisi ọhụrụ dabere na maapụ nkesa na oke.
Mgbe nkwekọrịta ahụ malitere ịdị irè, ndị otu Chuangmei ga-ejikọ nyocha saịtị ahụ yana ozi nke onye ahịa nyere iji nye nkọwapụta nkesa ihe ọkụkụ zuru ezu n'ime ụbọchị ọrụ 7, gụnyere eserese nkesa ohere, atụmatụ eserese nke ebe nnweta pipeline maka sekit / ụzọ mmiri / gas / ọwa nsị. Ndị ahịa nwere ike ịrụ akụrụngwa nke ihe ọkụkụ dị ka eserese.